Hamba uye kwiivenkile / iipaki / edolophini. Iyadi ebiyelweyo/Izilwanyana zasekhaya zilungile
Hamba uye edolophini ngemizuzu elishumi! Irenti yenyanga ibandakanya izinto eziluncedo, i-wifi, iilinen kunye nayo yonke into oza kuyidinga ukwenza ikhaya edolophini yaseAsheville. Indawo ezolileyo nenobubele, imayile enye ukusuka esibhedlele okanye e-UNCA. Indawo ebiyelweyo yabucala kunye nedesika yabucala. Igumbi lokuhlambela labucala kunye nendawo yokutshixa ibhayisekile yakho. Indawo yokupaka ezinikezelweyo. Nceda uqhagamshelane nam kwangaphambili ukuba ufuna ukuzisa isilo-qabane sakho. Andizi kuvumela izilwanyana zasekhaya ngaphandle kokubhengezwa kwangaphambili. Kukho idiphozithi yokhuseleko efunekayo kuzo zonke izilwanyana zasekhaya.
I-Asheville yokwenyani...indlu enesitayile segcisa eneyadi yobuhlobo ebiyelwe ngasemva kunye nabamelwane abakhulu macala onke. Hlala apha kwaye uhambe ngokulula edolophini okanye kwiindledlana ezinamaplanga kunye nezitiya zebhotani e-UNCA. Ubumelwane obulungele ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukubaleka okanye ukuzulazula nje kwaye udibane nabantu .... basekhaya kakhulu kwaye banobuhlobo! Ukutya okuPheleleyo, uMrhwebi kaJoe kunye neevenkile ezininzi zekofu ezikufutshane, iivenkile zokutyela kunye neZiko leYoga laseAsheville zonke zingaphakathi kwebhloko ezine.
Indawo yakho enelanga esezantsi ijonge kwiyadi enkulu ebiyelweyo kwaye izolile, ibucala kwaye ikhuselekile. Yonke into oyifunayo ukuze uhlale kwaye ujabulele ubomi bakho e-Asheville inikezelwa ... oomatshini bokuhlamba, i-wifi, i-dishwasher, i-oven convection, i-hot plate kunye nazo zonke izinto zendlu. Indlu ihlala ikhululekile ehlotyeni okanye ebusika kwaye kukho abalandeli kwigumbi ngalinye kunye nenkqubo yokufudumala kunye ne-AC.
Intle, ibhedi entsha yekumkanikazi kwigumbi lokulala, hamba ngekhabhathi kunye nendawo eninzi yokunxiba. Igumbi lokuhlambela elinye elikhulu kakhulu elineesinki ezingamampunge ezimbini, igumbi langasese elahlukileyo kunye neshawari enkulu yokuhamba.
Unedekhi yakho yokuvula ngasemva kweyadi. Kukho izitiya zeentyatyambo owamkelekileyo ukuba uzonwabele.
Iyadi yangasemva ibiyelwe ngokukhuselekileyo kwaye ukuba uzisa inja yakho echubekileyo nezolileyo okanye ikati kulungile, kodwa undazise kuqala ukuba ufuna ukuzisa izilwanyana zasekhaya kuba kunokubakho umrhumo owongezelelweyo ngokuxhomekeke ekubeni uhlala ixesha elingakanani kwaye luhlobo luni lwe isilwanyana osithandayo.
Indawo yokupaka ngaphandle kwesitrato kwindawo enikezelweyo. (kodwa awuyifuni imoto ukuba uhlala apha, yindawo ekufutshane nedolophu kwaye i-public trans ikude nje)
4.49 · Izimvo eziyi-89
Ndiyawuthanda ummelwane wam! Inobuhlobo, ilula, ithule kwaye yeyona ikufutshane edolophini, igrosari, i-yoga kunye neevenkile zekofu. Kukho iinkuni ezineendlela ezikufutshane zokuhamba nenja yakho kwaye uthethe nemithi. Awudingi moto apha, yonke into ikude ngeenyawo okanye ngebhayisekile.
Ujoyine nge- 2010 Disemba
I respect your privacy, so ndiyanamnkela nje ekufikeni kwenu ndinincede ngayo yonke into eniyicelayo kodwa ke mhlawumbi asinobonana kakhulu. Ukuba kukho into oyifunayo okanye unesicelo, nceda undazise. Ndifuna ngokwenene ukuhlala kwakho kube kokonwaba kwaye ndingakuvuyela ithuba lokuba ushiye uphononongo oluhle.
I respect your privacy, so ndiyanamnkela nje ekufikeni kwenu ndinincede ngayo yonke into eniyicelayo kodwa ke mhlawumbi asinobonana kakhulu. Ukuba kukho into oyifunayo okanye unesi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Asheville